Somali News 12.22.20
Reynolds waxay sheegaysaa in kabadan 8,400 howlwadeenada daryeelka caafimaadka safka hore in laga talaalay COVID-19. Toddobaadkii hore, saraakiisha gobolka waxay rajeynayeen inay helaan 26,000 qaadasho oo ah tallaalka Pfizer. Reynolds wuxuu tilmaamay khalad qorsheyn oo sababay qiime aad u sareeya oo ku saabsan qoondada gobolka.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay 64 dheeraad ah oo COVID-19 ah oo ku dhimatay Talaadadii, waxaa jiray in ka badan 1,300 oo kiisas wanaagsan oo dheeraad ah 24-saac ee la soo dhaafay.
Tallaalada xarumaha daryeelka muddada-dheer iyada oo loo marayo barnaamijka farmasiga ee dowladda federaalka ayaa la filayaa inay bilaabato Isniinta.
(Heerka waxtarka leh ee tijaabada ah ee labada toddobaad ah ee Degmada Woodbury wuxuu ka hooseeyaa heerka 15% ee 13.9%. CDC waxay sheegaysaa in wax kasta oo ka sarreeya 5% ay muujinayaan fiditaanka bulshada ballaaran.
Saraakiisha caafimaadka ee Nebraska ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga feejignaado kala fogaanshaha bulshada si loo xadido faafitaanka coronavirus inkasta oo talaalada la bilaabay la bilaabay iyo tirooyinka virus-ka ee gobolka oo soo fiicnaaday dhawaanahan.)
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegay in khiyaanooyinka la xiriira tallaalka COVID-19 ay ku dhex wareegayaan bulshada dhexdeeda.
Mid ayaa codsanaya macluumaadka kaarka deynta si qof loogu daro liiska mudnaanta tallaalka. Midda labaad waa qoraal ama emayl ay ku jiraan iskuxirka daraasad ku saabsan waxa u muuqda inuu yahay xafiiska caafimaadka ee deegaanka. Laakiin, maahan.
Saraakiisha caafimaadku waxay rabaan dadweynaha inay ogaadaan in talaalka lagu siinayo lacag la’aan. Si kastaba ha noqotee, adeeg bixiyeyaashu waxay kaa qaadi karaan khidmadda maamulka.
Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in Iowa ay ku socoto wadadii ay ku bilaabi lahayd talaalka guryaha kalkaalinta caafimaadka ee gobolka usbuuca soo socda. Taasi waa inkasta oo gobolka loo qoondeeyay bilowgii tallaallada oo hoos u dhacay ku dhowaad 20 boqolkiiba.